Mudzimai Asingaoni Anopindurwa Minyengetero Yake
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Basque Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kamba Kannada Kazakh Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Lari Lithuanian Luganda Luo Luvale Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Mingrelian Mongolian Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Pangasinan Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Huallaga Huánuco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Thai Tigrinya Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Welsh Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Mudzimai Asingaoni Anopindurwa Minyengetero Yake
Mumwe weZvapupu zvaJehovha wekuAsia anonzi Yanmei akabatsira mumwe mukadzi akanga asingaoni, ainzi Mingjie kuyambuka mugwagwa. * Mingjie akati: “Maita henyu. Mwari akukomborerei!” Yanmei akazobvunza mukadzi uyu kana aida kudzidza Bhaibheri. Mingjie akazoudza Yanmei kuti anga ari kunyengetera mazuva ese, achikumbira Mwari kuti amuratidze sangano rechokwadi. Nemhaka yei aikumbira kuratidzwa sangano rechokwadi?
Mingjie anoti muna 2008 akakokwa neshamwari yake yakanga isingaoniwo, kuti vaende kuchechi yaibatsira vanhu vakaremara. Mharidzo payakapera, Mingjie akabvunza mupristi kuti zvaaitaura aizvitora mubhuku ripi. Akamuudza kuti aizvitora muBhaibheri Shoko rechokwadi raMwari. Mingjie akabva ava neshungu dzekuda kuriverenga. Akatsvaga Bhaibheri rebraille rechiChinese uye akariverenga rese mumwedzi 6. Mingjie paaiverenga Bhaibheri akapedzisira aona kuti dzidziso yekuti Mwari Utatu, iyo yaidzidziswa muchechi make, ndeyenhema uye kuti Mwari ane zita rekuti Jehovha.
Mingjie akaodzwa mwoyo nezvinhu zvaiitwa nevanhu vemuchechi make. Akaona kuti vakanga vasingararami zvinoenderana nezvaaiverenga muBhaibheri. Zvimwe zvacho zvaiva zvekuti vanhu vakanga vasingaoni vaipiwa chikafu chinenge chasara, asi vamwe vese vachipiwa chikafu chakanaka. Mingjie akarwadziwa nezvaaiona achibva atanga kutsvaka imwe chechi yekupinda. Ndizvo zvakaita kuti Mingjie anyengetere achitsvaga sangano rechokwadi rechiKristu.
Mwoyo wakanaka waakaratidzwa naYanmei wakaita kuti Mingjie abvume kudzidza Bhaibheri. Kwapera kanguva, Mingjie akazopinda musangano wake wekutanga weZvapupu zvaJehovha. Mingjie anoti: “Handikanganwi zuva randakatanga kuenda kumisangano. Hama nehanzvadzi dzakandigamuchira nemufaro zvekuti ndakaita sendichachema. Kunyange zvazvo ndisingaoni, ndakanyatsoona kuti vane rudo uye havasaruri.”
Mingjie akafambira mberi uye akatanga kupinda misangano nguva dzese. Chainyanya kumunakidza kuimba nziyo dzeUmambo, asi dambudziko raiva pakuti pakanga pasina bhuku renziyo rebraille. Saka akabatsirwa nevamwe vemuungano achibva agadzira bhuku rake renziyo. Akaita maawa 22 kuti apedze kunyora nziyo dzese 151! Muna April 2018, Mingjie akatanga kufambawo achiparidza achiita maawa 30 pamwedzi.
Kugadzira bhuku rebraille ibasa rakaoma
Kuti abatsire Mingjie kugadzirira kubhabhatidzwa, Yanmei akarekodha mibvunzo uye mavhesi zviri mubhuku raTakarongwa Kuita Zvinoda Jehovha. Anoti: “Rudo rwandakaratidzwa nehama nehanzvadzi pagungano iroro rwakandibaya mwoyo. Ndakatanga kuchema, nekuti ndakanga ndawana sangano rechokwadi randaitsvaka.” (Johani 13:34, 35) Iye zvino Mingjie avakuda kuratidza rudo serwaakaratidzwa zvekuti avakupedza nguva yake yakawanda achiparidza.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mudzimai Asingaoni Anopindurwa Minyengetero Yake
ijwex nyaya 16
Vhidhiyo: “Dai Risipo, Handizivi Kuti Ndaizoita Sei”
Maoko Angu Ndiwo Maziso